कोरोनासँग भाग्ने होइन, लड्ने होः उपप्रधानमन्त्री – Makalukhabar.com
२०७७ असार २३, मंगलवार १७:२०
काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनासँग भाग्ने नभइ लड्नुपर्ने बताएका छन् । भाटभटेनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले भाटभटेनी माताको मन्दिर परिसरमा स्वर्गीय बुबा बृषबहादुर गुरुङ र आमा धनमाया गुरुङको स्मृतिमा नक्सालस्थित भाटभटेनी परिसरमा २ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागेका सत्तलकाे उद्घाटन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘कोरोनासँग भाग्ने होइन लड्ने हो । यो आयो भनेर त्रसित भएर भाग्यौं भने कहाँ जाने ? आज हामी भागौंला भोलि भोकमरीबाट मर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? हामीले हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढाउनैपर्छ । कोरोनासँग लड्नु व्यक्तिव्यक्तिको जिम्मेवारी हो । हामी बचेर देश र समाजलाई बचाउने हो ।’
उक्त भवनको शिलान्यास गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले व्यवसायी गुरुङको प्रशंसा समेत गरेका थिए । उनले भने, ‘मीनबहादुरजी धनमात्रै होइन मन पनि भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । हामीले मीनबहादुरजीलाई के पाएका छौं भने धन र मन दुवै भएको व्यक्तिका रुपमा । हामीले त्यसरी चिन्छौं । उहाँजस्तै निजी क्षेत्रमा क्रियाशील धेरैजना हुनुहुन्छ । उहाँलाई अनुसरण गर्दै उहाँहरु पनि अघि बढ्नुपर्छ । लगनशील भएर काम गरिरह्यो भने प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ ।’
सोमबार नयाँ भवन निर्माणका लागि भूमि पुजन गरिएको छ । काठमाडौंमा बाँच्न र भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि आफूले सुरु गरेको व्यवसाय अहिले यहाँसम्म विस्तार भएको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक गुरुङले बताएका थिए ।
समितिबाट पास भयो निजामती सेवा विधेयक, मन्त्रीले जनाएनन् सहमति